‘होल बडी चेकअप’ र चलाइएको हौवा – Chakra Jwala
‘होल बडी चेकअप’ र चलाइएको हौवा
Posted on 14 Jun 2017 29 Jul 2017 by Chakra Bhandari
-डा. समिर लामा
हिजोआज स्वास्थ्यको बजारमा ‘होल बडी चेकअप’को फेसन खुब चलेको छ। यसलाई छोटकरीमा डब्लुबीसी पनि भन्दा रहेछन्। विभिन्न अस्पतालहरुले यसका विभिन्न प्याकेजहरु ल्याएर ग्राहकहरुलाई आफूतिर तान्ने होडबाजी नै चलेको छ। यसको आफ्नै फाइदाहरु पनि छन्। आफूलाई स्वस्थ ठान्ने व्यक्तिहरुले पनि यो जाँच गराउदा रोग पत्ता लागि बेलैमा उपचार शुरु गरेर जीवन नै बचेको घटनाहरु पनि छन्। जुन देख्दा सुन्दा सबैले यो गर्नैपर्ने जस्तो भान हुन्छ। आफूले वरपर जे देखियो, सुनियो, आफूलाई नि त्यही रोग लागे झैं लाग्नु सामान्य ह्युमन साइकोलोजी नै हो। फलाना त जन्डिस लागेर मर्‍याे भनेपछी सामान्य विरामी भए पनि अस्पताल पुगेर जन्डिस जाँच नगराई मनले मान्दैन। फलानाका टाउको दुख्यो–दुख्यो भन्थ्यो, पछी त ब्रेन ट्युमरले मरेछ भनेको सुन्दा आफ्नो टाउको दुखाइ नि कतै ब्रेन ट्युमर त हैन, एकपटक सिटी स्क्यान गर्न पाए ढुक्क भइन्थ्यो भन्ने कुरा मनमा खेलिरहन्छ। तर के यसरी डाक्टरको उचित सल्लाह विना आफ्नो डरले गरिने, प्याकेजको रुपमा गरिने जाँचहरुले वास्तवमै हित गरिरहेका हुन्छन् त?
‘होल बडी चेकअप’ गरेर बेलैमा रोग पत्ता लागेर यसको फाइदा लिएकाहरुका लागि त यो वरदान नै हुन्छ। तर ती कति छन्? कति जनाको होल बडी चेकअप गर्दा कति प्रतिशतमा रोग देखिएको हो? अर्थात जाँच गरिएको मध्ये कति प्रतिशतलाई यसले फाईदा पुर्‍याएको हो? यसको भने कतै हिसाब भएको पाइदैन। हुन त स्वास्थ्यको लागि के पैसाको हिसाब गर्ने भन्ने पनि होलान् तर स्वास्थ्य भनेर जथाभावी र अनावश्यक जाँचहरु गर्नु र जनतामा त्यसको गलत सन्देश दिएर त्यसबाट व्यापारिक फाईदा उठाउनु गलत हो।
यहाँ मैले नियमित स्वास्थ्य परिक्षणको विरोध गरेको छैन। स्वस्थ हुँदा नै नियमित रुपमा चिकित्सकलाई भेटेर शारिरिक परिक्षण गराउनु (जसमा ल्याब टेस्ट गर्नैपर्छ भन्ने हुन्न) तौल, उचाइ, पेटको गोलाई नाप्ने, बीएमआइ नाप्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु लिने र आवश्यक परेमा ल्याब टेस्टहरु गराउने प्रकृयाको म समर्थन गर्छु। तर यहाँ त विभिन्न रगत जाँचहरुलाई प्याकेजको रुपमा सुपथ मूल्यमा अफर दिएर उपभोक्तालाई दिग्भ्रमित गर्दै आकर्षित गरिदैछ, त्यसको मैले विरोध गरेको हुँ। हामी चिकित्सकसँग गरिने कन्सल्टेसन, शारिरिक जाँचलाई भन्दा मेसिनले गर्ने रगत, पिसाब, पेट, छाती र सम्पूर्ण शरीर जाँचलाई बढी महत्व दिइरहेका छौं, जुन गलत हो। यस्ता होल बडी चेकअपका प्याकेजहरुले समाजमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको मानसिक रोगहरुलाई पनि नजरअन्दाज गरेको छ। हामी रोग रगत, पिसाब, एक्सरे, सिटी स्क्यान, कागजी रिपोर्टमा खोज्दै गर्छौं, उपचार गोली, सूई, सलाइनमा खोज्दै गर्छौं, र चिकित्सकसँगको सल्लाह, परामर्श, रोग र स्वास्थ्य बारेको जानकारीलाई बिर्सदै गएका छौं।
उदाहरणको लागि बेसिक हेल्थ प्याकेजमा सीबीसी, क्रिएटिनिन, टिएसएच, बिलिरुबिनलाई पनि राखिएको रहेछ। यी जाँचहरुले के रोग पत्ता लगाउन खोज्या हुन्? विना कुनै स्वास्थ्य समस्याका सामान्य मान्छेमा सीबीसी जाँच हेरेर के रोग पत्ता लगाउन खोज्या हुन्? ब्लड क्यान्सर? कि रक्तअल्पता? कि कुनै संक्रमण? क्रिएटिनिनलाई सामान्यरुपमा म्रिगौलाको जाँचको रुपमा लिइन्छ, तर धेरै नन-मेडिकल मान्छेहरुलाई थाहा नहुनसक्छ, दूवै म्रिगौलाको काम ६० प्रतिशतसम्म बिग्रदा पनि क्रिएटिनिन भन्ने जाँच नर्मल आउनसक्छ। म्रिगौलाको अवस्था सहि भए नभएको थाहा पाउन यो जाँच फाइदाजनक छैन। बरु नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेल्थ पोस्ट स्तरसम्म पुर्याएको नि:शुल्क पिसाब जाँचमा हेरिने एल्बुमिन र सुगरको डिपस्टिक टेस्टले राम्रो स्क्रिनिङ टेस्टको काम गर्छ। हिजोआज थाइरोइडको जाँच पनि अन्धाधुन्द हुने जाँचहरुमा प्रमुखरुपमा आउछ। सबै स्वस्थ मान्छेहरुलाई होल बडी चेकअप भन्दै महंगो थाइरोइडको जाँच गराइनु लुट नै हो। डाक्टरसँगको परामर्शमा थाइरोइड सम्बन्धी रोग हुने शंका लागेमा र केही निश्चित समूहमा स्क्रिनिङ टेस्टको रुपमा यो जाँच गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्यमा गरिने कुनै पनि जाँचले कसरी रिजल्ट दिन्छ? त्यो पोजिटिभ आउनुको मतलब के हो ? त्यसको मात्रा सामान्य भन्दा बढी देखिनुको मतलब के हो ? कुनै पनि जाँचको सामान्य मात्रा वा नर्मल लेभल भनेको के हो ? यी कुराहरु सामान्यतया मान्छेहरुले बुझेका हुँदैनन्। जस्तो खाली पेटको सुगर जाच्दा १२७ आयो भने सुगर भयो भने पूरै खाना बार्ने तर १२५ आयो भने मलाई सुगर छैन भने खुसी हुने जमात ठूलै छ, जुन गलत हो। जन्डिस २ पुग्दा नि ‘ओहो, मलाई जन्डिस भयो’ भनेर सबै खाना बार्ने अनि १२ पुग्ने बित्तिकै जाँडरक्सी शुरु गर्नेको भिड नि ठूलो छ। अर्को कुरा कुनै पनि टेस्ट सतप्रतिशत सहि हुँदैन। कुनै टेस्ट पोजिटिभ आउँदैमा त्यो व्यक्तीलाई उक्त रोग छ भन्ने १००% ग्यारेन्टी हुँदैन र टेस्ट नेगेटिभ आउँदैमा १०० प्रतिशत रोग छैन भन्ने पनि हुँदैन। त्यसैले मेडिसिनमा सधैं भनिन्छ, टेस्टको हैन विरामीको उपचार गर्नुपर्छ। उसको लक्षण, समस्या, अनी उपचार प्रकृयाले आउनसक्ने जटिलता सबैलाई तौलिएर मात्र उपचार अघी बढाउनुपर्छ।
अर्को अचम्मको जाँच भनेको रगतमा हेरिने युरिक एसिड हो। नेपालीलाई जहाँ जे दुखे पनि युरिक एसीड हेर्नुपर्छ, डाक्टरहरुलाई नि सजिलो, युरिक एसिड हेरम भन्दियो। सुन्दा अचम्म लाग्ला मेडिसिनमा युरिक एसिड भन्ने रोग नै छैन। युरिक एसिडको मात्रा जोर्नीमा बढी भएर जोर्नी दुख्ने रोगलाई गाउट भनिन्छ, यसको डायग्नोसिस क्लिनिकल्ली अर्थात लक्षण र शारिरिक जाँचको आधारमा पनि गर्न सकिन्छ, कन्फर्म जाँचको लागि सुन्निएको जोर्नीबाट पानी (साइनोभियल फ्लुड) निकालेर जाच्नुपर्छ। रगतमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्दैमा त्यसैले जोर्नी दुखेको भन्न मिल्दैन। यो कुरा आम मानिसलाई कसले भन्दियोस्, सबै जो रगत जाँच गराउदै युरिक एसिडको नाममा व्यापार गर्न व्यस्त छन्।
४० वर्ष कटेपछीको प्याकेजमा पीएसए प्रोस्टेटको क्यान्सरको जाँच पनि रहेछ। अझै पनि विश्वभरी नै पीएसएलाई प्रोस्टेट क्यान्सरको लागि प्रारम्भिक जाँच मान्ने कि नमान्ने भनेर बहस चलिरहेको बेलामा नेपालमा ४० कटेका सबैलाई होल बडी चेकअप भनेर ‘पीएसए’ टेस्ट राखिनुको अर्थ के हो? पीएसएको मात्रा धेरै आउँदैमा तपाईंलाई प्रोस्टेट क्यान्सर छ नै भन्ने पनि हुँदैन, उमेर बढ्दै गएपछी प्रोस्टेट बढ्दा पनि यसको लेभल बढ्न सक्छ र यो क्यान्सर पत्ता लागे पनि यसको उपचार गराएर फाईदा बढी हुन्छ कि बेफाईदा भन्ने पनि बहसको कुरा छ। यस्तो जाँचलाई ४० वर्ष माथिका सबैलाई भनेर राख्दा पोजिटिभ आएर उक्त व्यक्तीलाई पर्ने अनावश्यक आर्थिक, मानसिक, शारिरिक भारको जिम्मा कल्ले लिन्छ?
सुगर छ छैन भनेर थाहा पाउनको लागि खाली पेटमा गरिने सुगर जाँच (फास्टिङ सुगर) सस्तो र राम्रो जाँच हो। यती किफायती जाँच हुँदा हुँदै एचबीए ए वन सी, जुन राम्रो भए पनि तुलनात्मक रुपमा धेरै महंगो हुन्छ, लाई किन होलबडी चेकअप भनेर ४० कटेका सबैलाई भनेर राखियो? के ४० कटेकाले फास्टिङ सुगर मात्र हेरेर मधुमेह भए नभएको थाहा हुँदैन र?
जाँडरक्सी, चुरोट धेरै खाने, पेटको गोलाई बढी भएको, उचाइको अनुपातमा तौल बढी भएको, बीएमआइ बढी भएको व्यक्तीलाई रक्सी, चुरोट कम गर्नुस्, व्यायाम गर्नुस्, चिल्लो कम गर्नुस्, हरियो सागसब्जी बढी खानुस्, फलफूल खानुस् भन्नलाई महंगा लिभर फङ्सन टेस्ट (एलएफटी) र लिपिड प्रोफाइल टेस्ट (रगतमा बोसोको जाँच) गरिरहनुपर्दैन।
अन्तमा ‘होल बडी चेकअप’का प्याकेजको नाममा पैसा र समय फाल्नु भन्दा नियमित चिकित्सकलाई गएर भेट्ने, शारिरिक परिक्षण गराउने र आवश्यक स्क्रिनिङ टेस्टहरु मात्र गराउनु फाईदाजनक हुन्छ। नियमित गराउनुपर्ने जाँचहरुमा प्रेसर नाप्ने, उचाइ, तौल नाप्ने, पेटको गोलाई नाप्ने, बीएमआइ नाप्ने, स्क्रिनिङ टेस्टहरुमा फास्टिङ सुगर टेस्ट, पिसाबमा प्रोटिन, सुगर हेर्ने, महिलाहरुले पाठेघरको मुखको क्यान्सरको लागि प्याप स्मियर टेस्ट गर्ने पर्छन्। यी बाहेक अरु डाक्टरसँगको सल्लाहमा आवश्यक जाँचहरु मात्रै गराउनु उपयुक्त हुन्छ।
डा लामा http://myhealthynepal.blogspot.com मा नियमित लेख्छन् ।
Previous Post unexpected time travel : bardia national park
Next Post नेपालको राजनीतिक विभाजन :•
2 thoughts on “‘होल बडी चेकअप’ र चलाइएको हौवा”
14 Jun 2017 at 4:26 pm
तपाईले उठाउनु भएको चासो जायज छ । प्याकेज सस्तो भनिए पनि डाक्टरले तेस भित्र यो यो पनि गर्न छुट्टै सल्लाह दिन्छन् , जुन महंगो हुन्छ । अस्पतालको पैसा छाप्ने मेसिन झैं बनेको छ, ती हेल्थ प्याकेज । चेकअप गर्नेले होस पु-याउनु पर्छ । मेरो यस्तै अनुभव छ ।
14 Jun 2017 at 5:55 pm